Loza iray, loza roa, poapoa mbay tany sao mahavoa… - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Orange Madagascar offre des « fan Zone » et 3 séjours en Egypte﻿ il y a 37 minutes
Loza iray, loza roa, poapoa mbay tany sao mahavoa…
R﻿atalata Jn Bà il y a 2 années
Saika isan’andro vaky izao no misy ny resaka faty olona hita etsy sy erao. Lalana natoraly ny fahafatesana saingy rehefa misesy ny fahafatesana volena dia mila mitsahatra, mijanona manontany tena. Mamy Rakotoarivelo, Vatofotsy Antsirabe, Ankazobe…
Manoloana ny nahafaty an’i Mamy Rakotoarivelo dia samy nanana ny fihetseham-pony ny tsirairay. Maro ireo fanehoan-kevitra na commentaire teo amin’ny fesiboky. Nanana ny fanehoany ny zava-misy ko any mpanakanto. Roa amin’ireny no zaraina eto. Aingam-panahy samy manana ny azy tokoa ka miavaka na ny endriky ny tononkalo na ny voambolana.
Izaho tsy mila voninkazo
Raha efa any anaty vatan-kazo
Vao ravahana ho tsara
Atao tsara karakara
Aza alatsaka akory
Raha hisy ihany ranomaso
Fony aho mbola ory
Moa ianao nanafosafo?
Aza ambara eo an-tsofoko
Fa tsy hisy reko na dia kely
Efa nijanona ny foko
Izao ianao vao sahy niteny?
Aza dokafana aho hoe tsara
Fahiny ianao tsy mba nahalala
Ny lanjan'ny hatsarako
Sao hiresaka amin ny vato
Tsy avona ...sanatria
Na hambo diso toerana
Na midongy ny fitia
An ity fiainana miserana
Fa mahitsy raha ny hevitro
Mba tsy hisy nenina ao afara
Raha hikatona ny endriko
Mandry eo am-parafara
Vao hilahatra hanambara
Fa ....iny anie ka olon-tsara
Baritafika July 28th 2017
Noho ity hafatra farany hitako nozarainy (tpkl M.R) ity dia narafitro tsotra tao anaty tononkalo io ambony io izany. Satria nampieritreritra ahy lalina tokoa ny tiany ambara.
Nanana ny aingam-panahiny koa i Andy Rebabe. Vakio anie.
Bala roa...bala rora !
Misento ny aveloko
Mahery ny alaheloko
Roa, tsy te-hahalala !
Ny lasan'ny tantarako
Ka betsaka no tsy arako.
Lazaina sy dradraina
Fa izaho manary aina
Mitifitra ny tsy hita.
Mba tena mahatalanjona,
Fa inona no tanjona
Anaty tsaho matevina ?
Fa izao mihelohelo
Ny mody tia rehetra
Fa tamin'ny fahaveloko
Firy no nitsetra
Nandingana ny fetra ?
Fa rehefa indray aho lasana
Ambadiky ny fasana
Hitsetsitra ny mamy ?
Betsaka ireo tamy
Miseho ho tena namana
Sy tia manolo-tanana ?
Fony aho velona
Miseho ho mahalala ?
Mpamingana ny dia !
K'aleo hipenimpenina !
Andy Rebabe /29.07.17 (sao dia ataon'ialahy hoe...)
Andy Rebabe 29 juillet, 13:10 ·
Nisy ny famonoana zazamenavava, tao ny fandatsahana aina feno habibiana vehivavy tany Vatofotsy na koa i Tsiandopy Jacky Mahafaly. Izany rehetra izany dia zary mampiaka-taraina ny mpanakanto izay miantso ny mpiray tanindrazana hoe :
Malagasy o ! Malagasy
Dia hifamono ve isika fa mafy ny adim-piainana ?
Dia hivarina any ankady, handoto ny fisainana ?
Noho ny tsy fananana ny ampy dia mandromba no atao ?
Tsy iza no lasibatra fa izahay havanao…
Efa ho isan’andro izao no misy ra mandriaka
Iza no nanao izany ? Isika samy isika
Malagasy izao, toa ahy sy toa anao
No nahavanona ny loza sao hadinonao
Valifaty ve ? Sa fitsiriritana harena ?
Tsy mihonona, tsy miezaka sa fitiavan-tena ?
No nanimba ny ao an-doha, ho lasa feno olitra
Hamingananao ny olona, ho potika sy rotika ?
Koditra ny tenako, tsy afeniko aminao
Very ilay fanahy tao anatinao tao
Mampivarahontsana, ny sary naparitaka
Fa dia nahoana loatra, sa ianao no ratsy vintana ?
Raha misy fahavalo izay tokony hiombonana
Dia ny fahantrana, mitaky fahavononana
Fa raha famonoana olona, manoatra noho ny biby
Dia miala tsiny, miala fondro… fa aza omena tsiny
Raha hitotongana ny fiainana, hitafy fitarainana
Ny taranaka ao afara, ny zanaka sy zafy
Ho foana ny olon-tsara, hitombo ny olon-dratsy…
Nefa izaho sy ianao anie ka samy Malagasy.
Baritafika July 31th 2017
Soritana fa tao amin’ny Facebook na fesiboky no nangalana ny tononkalo tahaka ny fanao mahazatra fa io tambazotra dia mampiakatra aingam-panahy araho anie…
FB hoy aho fialam-boly
Nefa koa itanisana kolikoly
FB koa fotoam-bavaka
Fiangonana iray tena miavaka
Zay tsy zaka eto no avoaka
Itantarana ny tsy rariny
Ny lagy koa be no maka
Varotana eto daholo ny vao sy ny tola
FB koa fitadiavam-bady
Maso mijery lasa mitondra mody
Inona no atao ? Hanangana saina fotsy ? Fa iza no mpandresy hanaterana izato saina fotsy ?Hangina hitolefika ?
Rehefa hanakatona ny fichier dia indro fa nilatsaka ny vaovao ratsy. Tra-doza ny fiara nitondra ireo STK avy any Itasy ho an’ny Mahajanga. Maro no maty be dia be ny naratra.
Hoy ny tononkalo iray tao amin'ny Fesiboky nanoloana izany
Amin’ny fo mangasihasy
Ny jonitra natiora
Sy ny habaka any Itasy…
Hody an-Janahary !
Ny kiaky ny ra
Misy hasina sy jina,
Ny dimby sy fara !
Mizou (1 aogositra 2017)
Ho fara-teny entina hisarahana, ny amin’ny anio re, indro teny notsongaina tato ho fanentanana : « Raha misy fahavalo izay tokony hiombonana, dia ny fahantrana ».
CAN 2019 : Orange Madagascar offre des « fan Zone » et 3 séjours en Egypte﻿ - il y a 37 minutes
Feon'i Lakroa : Gazety Lakroa nivoaka ny 23/06/19 - il y a 4 heures
CNaP﻿S - MIN FOP : Le « Task Force » de la protection sociale à Betroka - il y a 5 heures
MINFOP – CNaPS : Tsy maintsy ampidirina CNaPS ny mpiasa Malagasy - il y a 4 jours